BMW Australia ichaganhurira kugoverwa kweiyo nyowani X7 Dark Shadow Edition mamodheru kune xDrive30d uye M50i mamodheru, uye ichavhurwa munharaunda muno munaKurume 2021, iine mashanu chete emhando imwe neimwe. BMW Shopinobatsira kuchengetedza nekuda dhipoziti yemadhora zviuru zvishanu, wozoisa odha uye infor ...
F15 X5 inotsiva iyo imwechete yekristaro giya lever yeX7, iri pano nhasi!
Mukati meBMW nyowani mukati, iko kusuduruka kwekristaro uye mapfundo zvinogona kunzi ndeimwe yezvakakosha zvikamu zvekusimudzira iko kwemukati kugadzirwa. Ivo parizvino anoshandiswa mune nyowani X5, X6, X7, 8 akateedzana uye mamwe mamodheru, asi iwo apfuura mamodheru anoda kuchinjwa. Hazvina kuoma ...
Iyo nyowani BMW 3 Series yepamusoro muviri kristaro giya lever?
Kubva pakatangwa mamodheru eBMW aine G chassis kodhi, mabhatani akave akabatanidzwa munzvimbo inoshanduka, zvichitiunzira akawanda mazano matsva. Iko kusanganisa kweye-bhatani kutanga, otomatiki kutanga-kumira, kutyaira modhi, uye yemagetsi ruoko bhureki ine simba rakasimba re techno ...
Mukutarisana nekushanduka kwemusika wepasirese uye hupfumi "hutsva hutsva", Quadrangle ine nzira refu yekufamba.
Quadrangle iri kuenderera ichikurudzira hunyanzvi uye shanduko yemabhizinesi, uye yakazvipira kuve kambani ine rakakurumbira bhizinesi hombe, hwakasiyana budiriro, kushanda kwepasirese, uye mubatanidzwa wekugadzira uye wekutengesa. Mukutarisana nekuchinja kwenyika musika uye econ ...
Kugamuchirwa kuMankalei Brand New webhusaiti, Mankalei Lab yakagadziridzwa zvizere muna Chikunguru, ichipa zvimwe zvigadzirwa zvitsva, mamwe masevhisi, uye yakatarisana nenyika yese. Iwe unogona zvakare kutevedzera edu enhau enhau maakaundi kuti uwane ruzivo rwechizvino-zvino kwatiri, unogona kuwana yemagariro enhau link pa ...